६ महिनाको १६ सय रुपैयाँ तिरे पुग्ने प्रभु टिभी सञ्चालनमा, एचडी च्यानलहरु पनि उपलब्ध :: BIZMANDU
प्रकाशित मिति: Jun 17, 2018 2:31 PM
काठमाडौं। प्रभु सहमूले डिजिटल भिडियो प्रशारणमा आधारित भएर प्रभु टिभी सञ्चालनमा ल्याएको छ। ओटिटी प्रणालीमा आधारित मोबाइल, ट्यावलेट तथा ल्याबटपमा समेत टेलिभिज च्यानल हेर्न सकिने सुविधा ल्याएको छ।
प्रभु टिभी बारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समूहका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनले उच्च गुणस्तरीय डिजिटल टिभी च्यानलहरु प्रशारण गरिने बताए।
प्रभु टिभी कलसाइन मार्फत डिभिबी-टिटु प्रविधिमा आधारित भएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय टिभी च्यानलहरु उपलब्ध हुने छन्।
पहिलो चरणमा प्रभु टिभी काठमाडौं, चितवन र पोखरामा उपलब्ध हुने छ। त्यसपछि वुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज लगायतका शहरहरुमा प्रशारण हुने छ।
प्रभु टिभीले बालबालिका, चलचित्र, खेलकुद, संगीत, मनोरञ्जन, सुचनामूलक नेपाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलहरु प्रशारण गर्ने छ।
एकल प्रयोगकर्ताले ६ महिनाको १६ सय रुपैयाँ तिरेर टेलिभिजन हेर्न सक्ने छ। यसका लागि १ हजार रुपैयाँ सेटअप बक्सका लागि अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छ। संस्थागत प्रयोगकर्ताका लागि मासिक २ सय र सेटअप बक्सका लागि ८ सय अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छ।
६ महिनाको १६ सय रुपैयाँ तिरे पुग्ने प्रभु टिभी सञ्चालनमा, एचडी च्यानलहरु पनि उपलब्ध को लागी ८ प्रतिक्रिया(हरु)
Ajaya Ghimire[ 2018-07-05 12:05:56 ]
एकल प्रयोगकर्ताले ६ महिनाको १६ सय रुपैयाँ तिरेर टेलिभिजन हेर्न सक्ने छ। यसका लागि १ हजार रुपैयाँ सेटअप बक्सका लागि अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छ। संस्थागत प्रयोगकर्ताका लागि मासिक २ सय र सेटअप बक्सका लागि ८ सय अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छ भनियो । एक व्यक्तिले कुनै संस्था वा कर्पोरेटले भन्दा बढी तिरेर कसरी हेर्न सक्छ । कि सुविधा वा च्यानल नं घटी बढी के छ त्यो कुरा यो समाचारमा विस्तृत रुपमा लेखिएको पाइएन । किन व्यक्ति भन्दा संस्थालाई कम मासिक शुल्क तोकिएको हो विस्तृत रुपमा समाचार संकलकले समाचार लेखिदिएको भए म जस्ता सबै आभारी हुने थिए । समाचारलाई समाचार नै बनाउनु छ भने सबै जानकारी एकै चोटी दि‌ंदा हुँदैन र ? अस्पष्ट र अपूर्ण जानकारीले भ्रम वाहेक केही पनि फैलाउँदैन ।
Rajbhai shrestha[ 2018-06-22 04:37:20 ]
प्रयोगकर्ताका लागि मासिक २ सय र सेटअप बक्सका लागि ८ सय अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छ। भन्नू भयाे ।कुरा अष्पष्ट भयाे । प्रत्येक मासिक पिच्छे २ सय र सेटअप बक्सका लागि ८ सय अतिरिक्त शुल्क तिरीरहुनु पर्ने हाे कि ?
याे dh छाता जस्तै राखेर गर्ने हाे कि वा केेवल टार राखेर ज्वाइन गरेर दिने हाेकि कुरा स्पष्ट गरि दिनु हुन अनुराेध छ
Rajbhai shrestha[ 2018-06-22 04:34:26 ]
Binod katwal[ 2018-06-19 10:53:53 ]
Excellent revolutionary news of prabhu tv.. hurry to connect it...
गौतम[ 2018-06-19 10:31:51 ]
कृपया OTT को बारेमा पूरा बुझाइ दिनु होला । TV च्यानल कति र कुन कुन स्पष्ट हुन सकियन साथै कलकी एरियामा के कसरी जडान गर्न सकिन्छ । pls !!
हालसम्म १८५ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।
laxman k[ 2018-06-18 07:34:46 ]
lets see the service first.
PADAM BAHADUR BOHARA[ 2018-06-17 04:32:25 ]
NEPAL KO7WATAI PRADESH MA CHITAI CHANCHALAN GARNU PARDAX
Shankar[ 2018-06-17 04:28:44 ]
तिनथाना,एरियामा राख्न के गर्नु पर्छ सुरुमा खर्च कति लाग्छ सम्पर्क नम्बर दिनुहोला